मसाई मारा, सफारी गन्तव्य | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | केन्या, के हेर्ने
मसाई मारा एक महान छ सफारी गन्तव्य र संसार भर बाट यात्रीहरु लाई आकर्षित गर्दछ। ठूलो जीवजन्तुमा रमाउनेहरूका लागि, अफ्रिकी देशहरूमा सफ्ट्री गर्ने काम भन्दा राम्रो गतिविधि अरू कुनै छैन, जुन दिउँसोको ज्वलन्त सूर्य र रातमा सुन्दर ताराहरूले भरिएको आकाशमुनि हो।
मसाई मारा छ केन्यामा र यो एक धेरै लोकप्रिय क्षेत्र को भाग हो, सेरेन्गेती राष्ट्रीय पार्क। यदि तपाईंको कुनै एउटा सपना अफ्रिका जान्न हो भने, त्यसो भए हामी आज यो अपवादलाई जान्दछौं प्राकृतिक आरक्षण।
जस्तो हामीले भन्यौं, यो केन्यामा छ, नरोक काउन्टीमा, र यो मासाई जनजातिको पछि नाम छ त्यो देशको यो भागमा बस्छ र मारा नदी द्वारा। मूल रूपमा, १ 60 s० को दशकमा जब केन्या अझै उपनिवेश थियो, यसलाई वन्यजीव अभ्यारण्यको रूपमा तोकिएको थियो।
पछि त्यो क्षेत्र अभिव्यक्तिको विस्तार गरिएको थियो जुन अरू क्षेत्रहरूमा जनावरहरूले मारा र सेरेनगेटीको बीचमा लैजान्थे। कुल लगभग १,1.510१० वर्ग किलोमिटर ओगट्छयद्यपि यो पहिले ठूलो थियो। त्यहाँ तीन प्रमुख क्षेत्रहरू छन्, सेकनानी, मुसियारा र मारा त्रिकोण।.
रिजर्व यसको द्वारा विशेषता हो वनस्पतिहरू र जीव। वनस्पतिमा एक्सेसिस र जीवजन्तु छ, यद्यपि यसले सम्पूर्ण भण्डार ओगटेको छ, जहाँ पानी छ त्यहाँ बढी केन्द्रित छ र त्यो आरक्षित स्थानको पश्चिमी भागमा छ। यहाँ मूलतः जनावरहरू बस्छन् जुन अफ्रिकामा प्रत्येक पोस्टकार्डमा हुनुपर्दछ: सिंह, चितुवा, हात्ती, भैंसा र गैंडा। त्यहाँ पनि छ हाइनास, हिप्पोस र चीताहरू र अवश्य पनि, Wildebeest। त्यहाँ तिनीहरू हजारौं छन्।
हामी थप्दछौं gazelles, zebras, giraffes र चराहरू को सयौं प्रजाति। र रिजर्भमा पर्यटकले के गर्न सक्दछ? खैर, मसाई मारा विशेष गरी केन्या र सामान्यतया अफ्रिकामा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरु मध्ये एक हो। भ्रमणहरू प्राय: मारा त्रिकोणमा केन्द्रित हुन्छन् जसमा वन्यजन्तु सब भन्दा बढि छ।
यो क्षेत्र १,1.600०० मिटर उचाईमा र छ एक वर्षा seasonतु छ जुन नोभेम्बर देखि मे सम्म जान्छ, डिसेम्बर र जनवरी बीच र अप्रिल र मे बीचमा वर्षाको शिखरको साथ। सुख्खा मौसम जूनदेखि नोभेम्बरसम्म हो। अधिकतम तापमान º० डिग्री सेन्टिग्रेड र न्यूनतम २०º सेन्टिग्रेडको आसपास हुन्छ।
मारा त्रिकोणमा दुई रनवेबाट पहुँच सधैँ खुला रहन्छ, मौसम कुनै फरक पर्दैन। तिनीहरू मारा सेरेना र Kichwa टेम्बो हुन्। मुख्य पहुँच सडक नेरोक र सेकनानी गेट पार गर्दछ। यस क्षेत्र भित्र आवास को प्रस्ताव छ।
यदि तपाईंसँग पैसा छ भने, महँगो आवास छ, जस्तै मारा सेरेना जसले १ comfortable० आरामदायक बेड वा सानो गभर्नर क्याम्प, lux 150 लक्जरी ओछ्यानहरूको साथ प्रस्ताव गर्दछ। यी दुई आवासहरू केवल मारा त्रिकोणमा भित्र रहेका छन्। परिधि मा Mpata क्लब, ओलोनाना, मारा सिरिया, Kilima शिविर र Kichwa टेम्बो छन्।
सफारीमा जानको लागि वर्षको उत्तम समय जुलाई र अक्टोबर बीच हो, प्रवासको समयमा। नोभेम्बर र फेब्रुअरीको सुरूमा त्यहाँ अद्भुत प्राकृतिक दृश्यहरू छन्, तर यदि तपाईं ती महिनाहरूमा जान सक्नुहुनेछ भने यो उत्तम हो। त्यसोभए त्यहाँ राती गाडी कारहरू हुन्छन्, यस व्यक्तिको संस्कृति, बेलुन उडानहरू, ताराहरूको मुनि भोजको बारेमा जान्न मासाई गाउँहरूमा भ्रमण गर्छन् ...
मसाई वा मासाई अफ्रिकाको प्रतीकात्मक जनजाति हो। यो घुमन्डी जमात परम्परागत रूपमा हर्डिंगको लागि समर्पित छ र उनीहरूको परम्परागत रातो कपडा र रंगीन शुकाका लागि प्रसिद्ध छ, उनीहरूको शरीरको सजावट। अफ्रीकी संस्कृति र अफ्रिकी जीव, एक सफारी मा जाने बारे सोच्न जब उत्तम संयोजन।
सफारीहरूको सोच विचार गर्दै रिजर्भले एक राम्रो अनुभव प्रदान गर्दछ किनकि हामीले भनेका थियौ कि यस महादेशका सबै प्रतीकात्मक जनावरहरू छन्। ती ठूला पाँच माईग्रेसन सिजन, जुलाई देखि सेप्टेम्बर, बिग नौमा परिवर्तन हुन्छन्, तर निश्चय पनि, सफारी कुनै पनि समय उत्कृष्ट छ। अहिले तिनीहरू पहिले नै २०२१ र २०२२ सफारीहरूको लागि आरक्षण गर्दैछन्, सस्तो बाट विलासी गर्न।
यी सफारीहरू भूमि वा विमानबाट हुन सक्छन्। रोड सफारीहरू धेरै लोकप्रिय र सामान्य रूपमा छन् नैरोबीमा सुरु र अन्त। स्पष्ट रूपमा, × × vehicles सवारी वा मिनी बसमा। भ्रमण नैरोबी र मसाई मारा बीच पाँच देखि छ घण्टा लाग्छs, कुन क्षेत्र मा निर्भर गर्दै तपाईं रिजर्भ भित्र रहन लाग्नु भएको छ। यस प्रकारको सफारी गरेर गरेको फाइदा भनेको यो हो कि यो विमान सफारी भन्दा सस्तो छ र तपाईंले केन्याली परिदृश्यहरू पहिलो व्यक्तिमा देख्न सक्नुहुनेछ र धेरै नजिक। नोक्सान यो हो कि तपाइँ भूमिबाट जानुहुन्छ ...
मूल्यहरु? मूल्यहरु यात्राको अवधिमा फरक पर्दछ, तर मार्ग सफारी, आर्थिक संस्करण, to०० देखि dollars०० डलर सम्म जान्छ; मध्यवर्ती संस्करण $ 400। सम्म र लक्जरी संस्करण करीव $ १,००० सम्म।
चार-दिन सफारीको लागि, मूल्यहरू $ 665 बाट शुरू हुन्छ र 1200 2600 (मध्यवर्ती संस्करण) सम्म जान्छ, लक्जरी यात्रामा जुन $ २800 सम्म जान सक्छ। पाँच-दिन सफारी $ 1600 र XNUMX १XNUMX०० बीचमा छ र सबै सात दिन सफारीको लागि। सफारी हप्तामा पाँच वा छ दिनको यात्राको रूपमा कम वा कम समान मूल्यहरू हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग समय छ भने पूरा हप्ता सुविधाजनक छ।
अब सम्बन्धमा हवाइजहाज सफारी वा फ्लाइ Saf सफारीहरू, ती पनि धेरै सुविधाजनक छन् किनभने हवाईजहाजबाट तपाई नैरोबीमा मसाई माराको साथ एक घण्टामा सामेल हुनुहुनेछ। त्यहाँ दिनको दुई पटक उडानहरू छन् र यदि तपाईं बिहान छोड्नुभयो भने तपाईं खाजामा शिविरमा पुग्नुहुनेछ। दरहरु? दुई दिनको एयरपोर्ट सफारी costs and and र $ 800 between बीचको बीचमा, तीन-दिन सफारी four 950 ०० र $ १$०० बीचमा, र-२990 र $ 1400$2365० बीचको चार दिने सफारीको लागत छ।
चाहे तपाइँ एक प्रकारको सफारीको लागि रोज्नुहुन्छ वा अर्को, जमिनमा प्रयोग हुने सवारीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, अधिकृत हुन्छन्: टोयोटा ल्याण्डक्रुइजर जीप र मिनी बसहरू। दुबैको छाना छ जुन अफ्रिकी भूमिहरूमा मनन गर्न खोल्न सकिन्छ र दुबैसँग रेडियो पनि छन् जसले तिनीहरूलाई पार्क रेन्जरसँग सञ्चारमा राख्छ। आवास प्रस्ताव फरक छयो सबै बजेटमा निर्भर गर्दछ, तपाईंसँग क्याम्पहरू छन् जुन पाँच तारा र अन्य साधारण व्यक्तिहरू छन् र निजी भाडा घरहरू पनि।
वास्तवमा मसाई मारा रिजर्भको सफारीमा जीप सवारी, बेलुन उडानहरू, मसाई गाउँहरू भ्रमण, पैदल यात्रा, घोडा सवारी र रोमान्टिक डिनर समावेश हुन सक्छ।शिविर मैदानहरूमा ताराहरूको मुनि। यो जानिरहेको छ, अफ्रिकी जनावरहरू र दृश्यहरू पहिलो हातले।
जानकारी को एक अन्तिम टुक्रा, रिजर्वमा प्रवेश गर्नका लागि शुल्क तिरेको छ यो निर्भर गर्दछ तपाईले रोज्नु भएको निवास स्थान कहाँ छ। यदि तपाईं भित्र बस्नुहुन्छ भने, प्रवेश २ 70 घण्टा प्रति वयस्क dollars० डलर र १२ बर्ष मुनिका बच्चाहरूका लागि 24० छ। यदि अर्को तरिकाबाट, तपाईं मुख्य रिजर्व बाहिर बस्नुहुन्छ, प्रवेश २ costs घण्टा 430० डलरको लागि र प्रति बच्चा 12 80 डलर।
यो दर नारोक पक्ष र मारा संरक्षणमा लागू हुन्छ, रिजर्भको पश्चिमी कोरिडोरमा। भाग्यशाली यी लागतहरु सफारीहरूको अन्तिम मूल्यमा समावेश छन्.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अफ्रिका » केन्या » मसाई मारा, सफारी गन्तव्य